Webedia: "Podcast Party" ine renji chinangwa - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 27, 2022 | nhau, Events, Vhidhiyo mitambo
Webedia, mushambadzi ari kuseri kwemhando dzemagazini seGamestar kana Gamepro, ane mazano matsva ekumutsa chiitiko: Neyekutanga "Gaming Podcast Festival" muGermany, ivo vanoda kugadzira zviuru zana nemakumi maviri neshanu podcast maonero mukati memavhiki mana. Mutambo uyu chirongwa chakabatana neGameStar, MeinMMO, GamePro uye Nerd&Kultur.
MaPodcasts ndeimwe yemafomati emazuva ano ekuteerera, asi zviri pachena kuti haana kupararira sekufunga kungafungwa nemunhu kupihwa hype. Zvinoenderana nekuchengetedza, Webedia zvakare inoisa tarisiro ye "yekutanga mutambo wepodcast mutambo muGermany".
Inofanirwa kunge iri maonero zviuru zana nemakumi maviri neshanu mukati memwedzi, saka vatambi vemitambo nevapesvedzera vari pane rondedzero yevaenzi, avo vanofanirwa kukurudzira vateveri vavo kuti vateerere uye kutora chikamu kubva Chivabvu 125.000nd kusvika 2.
Webedia Germany chikamu cheWebdia Group, iyo yakavambwa muna 2007. Boka reFrench media ndiro rechitatu pakukura muparidzi wevaraidzo muFrance. Pamwe chete nemamwe mapuratifomu epamhepo mumisika yeGermany, Brazil, Mexico, Spain, Turkey, Poland, Great Britain, Italy, USA uye Middle East, network yevaraidzo yeWebdia inosvika vanopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu evashandisi vakasiyana pamwedzi pasi rese.
Podcast guru Graf: "Iva nepati hombe yepodcast"
"Kubva pandakatora basa remafomati edu ekuteerera, ndaida kupemberera bato guru repodcast nevateereri vedu - ikozvino nguva yasvika!" anodaro Michael Graf, Musoro wePodcast kuWebdia Gaming.
Sekureva kwaWebdia, mutambo wepodcast ndiyo yekutanga yerudzi rwayo muGermany muchikamu chemitambo. Mhando dzeWebdia Gaming, MeinMMO, GamePro, GameStar uye iyo firimu podcast Nerd & Kultur vakabatana muchiitiko chemazuva mashanu.
Zvinangwa zviri pachena: mutambo unovavarira kumisikidza fomati nyowani inopa vatengi nzvimbo inonakidza yekushambadzira munharaunda yekuteerera. Networking nemamwe podcasts chimwe chikamu chehurongwa. Svika chinangwa: 1.500 panguva imwe chete vataridzi murukova mhenyu uye 125.000 podcast vateereri mumavhiki mana.
Izvi zvinofanirwa kubudirira nekuda kweiyo pfungwa yemutambo: live podcasts ane misoro yazvino mazuva ese, mhando yepamusoro yekugadzira, kudyidzana nevateereri uye vaenzi vanonakidza.
Hurukuro dzeawa imwe nehafu dzakarongwa, dzakarongwa naMichael Graf - nemibvunzo inopindirana yakabatanidzwa. Pamusoro pezviso zveWebedia, chikamu chega chega chichaita vaenzi vakaita saManuel Fritsch anobva kuInsertMoin, Gunnar Lott naChristian Schmidt kubva kuStayForever, pamwe nevanokurudzira mitambo "jessirocks", "RoyalPhunk" uye "iKnowReview".
Hurukuro idzi dzichatepfenyurwa paWebdia's Twitch chiteshi MAX uye kutepfenyurwa live paMeinMMO, GamePro uye GameStar. Iyo yakakosha: nharaunda inogona kuve chikamu chezvikamu kuburikidza nechat basa. Zuva rinotevera, chikamu chakasiyana chichave chiripo pane ese makuru podcast mapuratifomu. Inotanga muna Chivabvu 2, zuva rekupedzisira remapodcasts ari Chivabvu 6. Mutambo uyu uchashambadzwa zvine mukurumbira pamawebhusaiti eWebedia emitambo uye muMeinMMO neGameStar podcasts pachine nguva kuti ive nechokwadi chekutariswa kwakanyanya.
Gamestar XL [kunyorera kune gumi nemaviri nyaya gore rega rega] * Parizvino hapana ongororo 74,50 EUR tenga
Kare Crypto mitambo: Iyo Sandbox inobatsira Ukraine
Inotevera Kubudirira nenhamba dzekunzwa: Toni inotanga Europe shopu
Nier Replicant: New edition yeJRPG ichaonekwa muchirimo
Toy Ducati: Spin Master inopa yepamusoro RC mudhudhudhu
Fortnite yadzoka: vateveri vanofema zviri nyore - Chitsauko 2 chinounza hutsva
Ngaamhanye: Sonic kuMitambo yeOlympic - Tokyo 2020 mobile game inowanikwa munguva pfupi iri kutevera